Carolina Molina. Kubvunzana nemunyori weLos ojos de Galdós | Zvazvino Zvinyorwa
Kutora mifananidzo: Carolina Molina, Facebook nhoroondo.
Caroline Molina, mutori wenhau uye munyori we nhoroondo yenhau, akaberekerwa muMadrid, asi anga achibatanidzwa neGranada kwemakore. Kubva ipapo basa rake rekutanga richabuda muna 2003, Mwedzi pamusoro peSabata. Vanomutevera zvakanyanya senge Mayrit pakati pemadziro maviri, Albayzin hope, Hupenyu hwaIliberri o Vachengeti veAlhambra. Y yekupedzisira ndeiyi Maziso aGaldós. Ini ndinotenda chaizvo nguva yako uye mutsa izvi indavhiyu kwaanotiudza nezvake nezvose zvishoma.
Carolina Molina - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: Maziso aGaldós ingano yako nyowani, kwawakatama uchibva kumatimu ebhuku rako rekare. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
CM: Kubva ndichiri mudiki kwazvo, kuverenga kweGaldós kwakandiperekedza zhizha rega rega. Akave ari chirevo changu muchikamu changu cheMadrid, sezvakaita Federico García Lorca muchikamu changu cheGranada. Saka angangoita makore mapfumbamwe kana gumi apfuura iyo pfungwa yekunyora bhuku pamusoro paDon Benito Pérez Galdós, munyori wenhau wandakadzidza kunyora kubva kwaari yakandirova. Chinangwa changu chaive chekugadzira Galdosian essence inoverengeka. Ipa chiono chakazara chenyika yakamukomberedza: hukama hwepedyo, hunhu hwake, nzira yake yekujekesa zvinyorwa zvake kana maitiro aakatarisana nawo kuratidzwa kwemabasa ake emitambo. Iye zvino anopfuura chirevo, ishamwari yekufungidzira yandinogara ndichienda.
CM: Munguva pfupi yapfuura, mukufamba, akaonekwa nyaya yangu yekutanga. Yakanga yakanyorwa pane akasiyana mapepa anonamira. Yakanga iri nyaya amai vangu yandakataurira uye ini ndakaigadzirisa. Angave makore gumi nerimwe. Kwakazouyawo dzimwe nyaya dzevana uye mushure menguva dzekutanga nhetembo, nhetembo uye theatre. Makumi emakore akatevera gare gare nhoroondo yenhoroondo yaizosvika. Bhuku rekutanga randakaverenga raive Vakadzi vadiki. Naiye ndakadzidza kuverenga, ndaizoenda pamusoro pazvo zvinonzwika mukamuri rangu.
CM: Mushure, pasina kupokana. Uye hapana chandichawana chitsva: Cervantes, Federico García Lorca naBenito Pérez Galdós. Ose matatu ane mapoinzi mazhinji akafanana uye ndinofunga ese anoratidzwa mumabhuku angu.
CM: Jo kufora, ivo Vakadzi vadiki. Pandakaverenga bhuku iri ndainzwa kuzivikanwa naro zvekuti zvinoita sekunge kwandiri zvine chekuita nesarudzo yangu yekuve munyori.
CM: Ini handisi kunyanya kukakavara. Ndiri kungoda silence, mwenje wakanaka uye kapu ye té.
CM: Kusvika nguva pfupi yadarika nguva yakanakisa yekunyora yaive masikati, apo munhu wese ari kumborara. Iye zvino maitiro angu achinja Handina purogiramu yakatarwa. Kwete nzvimbo, kunyangwe kazhinji iri yekutandarira (kwandinayo tafura yangu) kana padhorobha.
CM: Ehe saizvozvo. Iyo nyaya (iyo ipfupi nyaya) uye iyo theatre. Ini ndinodawo nezve chinyorwa chenhoroondo and the biography, mhando dzandakaverenga nechishuwo chekuzvinyora.
CM:Ndiri kuverenga maviri nhoroondo, iya yemunyori wenhoroondo weGranada kubva ku. XVI uye yeaiye anonyanya kufarira hunhu kubva kuSpanish Renaissance. Handitaure mazita avo nekuti zvaizoburitsa musoro wenyaya yangu inotevera. Ini ndatangawo iyo anthology izvo Remedios Sánchez zvaakaita panhetembo dze Emilia Pardo Bazan (Kudonha kwakarasika mugungwa rakakura).
Kana zviri zvandiri kunyora izvozvi, ndiri muchikamu chemagwaro, ndakazvipira kune gadzirira pfupiso, zvinyorwa zvekunyora, uye nyaya wobva wandibatsira kutarisana nedanho rekugadzira iyo novel. Inguva refu uye inonetsa asi inodiwa nguva. Zvino, pane chero zuva rakapihwa, chinodiwa chekunyora chichauya uyezve zvakanakisa zvemutambo wemabhuku zvinotanga.
CM: Pandakatanga kunyora nguva dzose Ini ndaive pachena kuti ndaifanirwa kutsikisa. Nhoroondo isina vaverengi haina musoro. Vamwe vanyori vachati vanozvinyorera vega asi zvisikwa zvinoda kuti iwe ugovane. Bhuku rakanyorwa kuti ritaure chimwe chinhu, saka rinofanira kuburitswa. Zvakanditorera makore makumi matatu kutsikisa. Kana nyaya yangu yekutanga yaive nemakore gumi nerimwe, ndakaburitsa rondedzero yangu yekutanga ndiine makore makumi mana. Pakati ndakanga ndazvitsaurira kune utapi venhau, ndakanga ndaburitsa nhetembo uye nyaya pfupi, asi kutsikisa inova kwakaoma kwazvo.
Nzvimbo yekutsikisa iri kufa. Dai zvaive zvisizvo zvisati zvaitika, nekuuya kwedenda vazhinji vaparidzi uye zvitoro zvemabhuku zvakafanirwa kuvhara. Izvo zvichatoda isu kuti titorezve. Zvese zvachinja zvakanyanya. Ini handione iro ramangwana rine tariro.
CM: Ini ndakatanga denda ne kurwara kwemhuri kwakaoma kutevedzera. COVID yakasvika uye ndakaitazve chimwe chirwere kubva kumunhu wemhuri chakatonyanya kuoma. Iwo anga ari makore maviri akaomesesa kwazvo andakaratidza uye ndikasarudza kugara neimwe nzira uye nemamwe maitiro. Izvo zvakakanganisa zvinyorwa zvangu uye maitiro angu. Izvo zvakanaka ndezvekuti vanhu vaviri vakarwara vava nani, izvo zvinoratidza kuti pese pavanovhara musuwo vanokuvhurira hwindo. Zvichida chinhu chimwe chete ichocho chinoitika munyika yekutsikisa. Tichafanira kumirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Carolina Molina. Kubvunzana nemunyori weLos ojos de Galdós